Menu hanary lanja: Torohevitra sy tolo-kevitra ho an'ny sakafonao!
7 Novambra 2018
Raha sahirana amin'ny fahaverezan'ny kilao vitsivitsy ianao ary sahirana amin'ny dingana, angamba tokony hamerina handinika ny sakafonao isan'andro ianao. Mba hampihenana lanja,… Tohizo ny famakiana »Menu hanary lanja: Torohevitra sy tolo-kevitra ho an'ny sakafonao!
Fampiofanana mialoha karbaona: Inona no hohanina alohan'ny fampiofanana sy hahatratra tanjona?
5 Novambra 2018
Ny sakafo alohan'ny fanazaran-tena dia tena ilaina mba hanatsarana ny vokatra ho an'ireo izay manao fanofanana lanja. Ny fanazaran-tena mialoha dia miandraikitra ny fanomezana ny angovo ilaina... Tohizo ny famakiana »Fampiofanana mialoha karbaona: Inona no hohanina alohan'ny fampiofanana sy hahatratra tanjona?
Izay rehetra mitady hampihena lanja dia mahafantatra fa ny iray amin'ireo fomba haingana indrindra hanatrarana io tanjona io dia amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena. Tohizo ny famakiana »Fiofanana hampihena ny lanja: Ohatra sy torohevitra hanombohana anao anio ary hihena!
Kibon'ny fonosana enina: Fantaro ny fomba handresenao haingana ny "TOA" nofinofisinao!
Amin'izao fotoana izao, be dia be ny olona izay te-hihena matavy, hihena ary hanana fiainana tsara kokoa. Manao ny zava-drehetra izy ireo mba hananana… Tohizo ny famakiana »Kibon'ny fonosana enina: Fantaro ny fomba handresenao haingana ny "TOA" nofinofisinao!
Ny fihazonana ranon-javatra dia mety hitranga noho ny antony maro toy ny fiainana mipetrapetraka, ny olana ara-pahasalamana, ny olana hormona, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hafa. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia jereo ny antony,… Tohizo ny famakiana »Fitazomana ranoka: soritr'aretina, antony, sakafo manampy ary ny fomba fanariana azy indray mandeha sy maharitra!
Sakafo Ketogenika ho an'ny hypertrophy: Ahoana ny fomba fiasany? Inona avy ireo sakafo avela?
Efa nandre momba ny sakafo ketogène ve ianao? Amin'ny ankapobeny dia sakafo natao ho an'ny fitsaboana ny androbe, amin'ny ankapobeny ... Tohizo ny famakiana »Sakafo Ketogenika ho an'ny hypertrophy: Ahoana ny fomba fiasany? Inona avy ireo sakafo avela?
Famaritana hozatra: jereo ny fomba hitrangany, ny fanampiana tsara indrindra ary ny sakafo lavorary ho azy!
8 septambra 2018
Rehefa manomboka manao fanatanjahan-tena ny olona iray, dia manomana sy mametraka tanjona sasantsasany. Ny sasany te hampihena lanja, ny hafa hahazo hozatra, ny sasany noho ny... Tohizo ny famakiana »Famaritana hozatra: jereo ny fomba hitrangany, ny fanampiana tsara indrindra ary ny sakafo lavorary ho azy!
Ireo izay mitady fihenam-bidy haingana sy tsy mijaly loatra dia mitady vahaolana izay toa mahomby kokoa sy mitondra vokatra haingana. Izany no antony,… Tohizo ny famakiana »Fanakanana ny fiankinan-doha: Fantaro ny fiasan'ny vatanao!
Miaina ao anatin'ny vanim-potoana izay toa manjaka amin'izao tontolo izao ny fiainana ara-batana, ary tsy mijanona ny fitadiavana vatana tonga lafatra kokoa, fa ... Tohizo ny famakiana »Manaova aingam-panahy ho anao manokana: taratra mihoatra ny fenitra!
Tena ilaina ny dite ho an'ireo izay te-hihena kilao vitsivitsy. Izany dia satria izy ireo dia mampifangaro ny maha-salama amin'ny mety hampihenana lanja lehibe ... Tohizo ny famakiana »Tehina manify: Jereo ny karazany lehibe sy ny tombotsoan'ny tsirairay amin'izy ireo!